पढाइ कि सिकाइ ?- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७४ ०९:५८
र्‍याग गर्‍यौ कि ?
काठमाडौं — के तिमी कसैलाई जिस्काउने वा गिज्याउने गर्छौ ? गर्छौ भने यो बानी सुधारिहाल । यस्तो गर्दा गिज्याउनेलाई एकैछिन मनोरञ्जन त हुन्छ, तर जसलाई जिस्क्याइएको हो ऊ अत्यन्तै दु:खी र हिनताबोधको सिकार हुन पुग्छ ।
व्यक्तिगत रमाइलोका लागि गरिने यो कार्यले पीडितमा नराकात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ । ठटयौलो पारामा ठूलाबाट सानाका लागि गरिने यी कार्य शैक्षिक संस्थाहरूमा नराम्रो तरिकाले फस्टाउँदै गएको छ । विद्यालयहरूमा सिनियरले जुनियरलाई गिज्याउने वा मजाक गर्ने घटनाले दु:खद मोड लिएकोबारे समयसमयमा हामीले सुन्ने गरेकै छौं ।
तिमीहरूमध्ये कतिलाई स्कुलमा ठूला कक्षाका दाइ–दिदी या आफ्नै साथीले गिज्याएका छन् होला । अरूले सुन्ने र देख्ने गरी जिस्काएको कसलाई पो मनपर्छ र ? कलेज
वा विश्वविद्यालयमा सिनियर विद्यार्थीबाट जुनियरलाई गरिने यस्तो कार्यलाई ‘र्‍यागिङ’ भनिन्छ । यसको सुरुवात बेरुत र एथेन्सबाट भएको मानिन्छ । सेना र अंग्रेजी पब्लिक स्कुलमा यसलाई परम्पराको एउटा हिस्साकै रूपमा मानिएको थियो । आफूभन्दा
जुनियरलाई अनुशासनमा राख्न या आफूले भनेको मनाउनकै लागि यस्तो गरिन्थ्यो । युरोपेली मुलुकमा भने १५ औं शताब्दीमा यो सुरु भएको मानिन्छ । पछि अमेरिका हुँदै अन्य मुलुकमा समेत यो फैलियो । विकसित मुलुकमा ‘र्‍यागिङ’ गर्ने चलन केही हदसम्म कम हँुदै गएको छ । तर दक्षिण एसियाली मुलुकमा भने यो तीव्र रूपमा बढ्दो छ । सिनियर्सद्वारा जुनियर्समाथि गरिने कुनै पनि व्यवहारले बालबालिकामाथि नराम्रो छाप र प्रभाव पर्छ । नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, भारतजस्ता विकासशील मुलुकमा यो कार्यलाई बालबालिकाको उत्पीडनसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ ।
प्राय: गिज्याउने काम ठूलाले सानालाई गर्छन् । यसो गर्नु एक प्रकारको बद्मासी नै हो । यसले सिनियर्स र जुनियर्सबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बिगार्छ । यसले कलिलो मस्तिष्कमा अपमान र उत्पीडन महसुस गराउँछ । अति भयो भने व्यक्तित्व विकासमै नकारात्मक प्रभाव पार्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई मानसिक र शारीरिक रूपमा कष्ट पुर्‍याउने, चिढाउने, गिज्याउने वा उत्पीडनको सिकार बनाउने कदम तत्काल रोकिएन भने यो झन् बढ्दै जान्छ । यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव मनौवैज्ञानिक नै हो । कुनै कुनै घटनामा त बालबालिकाले आत्महत्या गर्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ । सानालाई जिस्क्याउँदा उनीहरूको मानसिक सन्तुलन प्रभावित हुन सक्छ । यसले व्यक्तिमा तनाव सिर्जना गर्छ । बालबालिकामा त झनै धेरै खालका नकारात्मक भावना उत्पन्न गराउँछ ।
तनावको प्रकृति र त्यसको हानिकारक प्रतिक्रियाबारे जानकार भएको अवस्थामा हामी त्यसबाट टाढा बस्न सक्छौं । र्‍यागिङ प्राय: विद्यार्थी–विद्यार्थीबीच अझ बढी हुन्छ । चर्को र्‍यागिङले अपमानित महसुस गर्ने, समूह या सार्वजनिक स्थलमा जानै डराउने अवस्था आउन सक्छ । यस्तोमा परेका बालबालिकामा एक्लो बस्ने, कम बोल्नेजस्ता लक्षण देखा पर्न सक्छन् । त्यसैले कसैले जिस्क्यायो, होच्याएको वा अपमान गर्‍यो भने तिमीले तत्काल कक्षाशिक्षक, विद्यालय प्रशासन वा अभिभावकलाई भनेर त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ ।
(साइन्सडाइरेक्ट अनलाइनमा प्रकाशित ‘प्रोसेडिया’ जर्नलको रिपोर्टमा आधारित)
लागूपदार्थको दुव्र्यसनमा लाग्न सक्ने
जिद्दी व्यवहार देखाउने
घुमक्कड जीवनशैली बन्ने
आक्रामक व्यवहार देखाउने
तनावपूर्ण अनुभवहरूको प्रतिक्रिया जनाउने
पारस्परिक सम्बन्ध बिग्रने
तनावको प्रतिक्रियास्वरूप चिन्ता बढ्ने
व्यक्तिको क्षमता र प्रदर्शनको स्तर प्रभावित हुने
आत्मसम्मान र आत्मविश्वास घट्ने
नराम्रो सपना देख्ने
कुनै पनि काम गर्न मन नलाग्ने
व्यवहार परिवर्तन हुने
एकाग्रता र ध्यान केन्द्रित गर्न समस्या हुने
कम आत्मसन्तोष मिल्ने
बिर्सिने समस्या आउने
गलत निर्णयहरू गर्न मन लाग्ने
शारीरिक समस्या :
एलर्जी देखिन सक्ने